I-Sandals Foundation: Ukwenza Umehluko Omkhulu e-Bahamas
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Unomthwalo wemfanelo » I-Sandals Foundation: Ukwenza Umehluko Omkhulu e-Bahamas
Izindaba zase-Antigua neBarbuda • Izindaba zeBahamas Breaking • Izindaba zeBarbados Breaking • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • I-Caribbean • Izindaba zeCuracao Breaking • Izindaba zeGrenada Breaking • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba zaseJamaica • Izindaba • Unomthwalo wemfanelo • Izindaba zaseSanta Lucia • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba
Isithombe sihlonishwa yiSandals Foundation
I-Sandals Foundation izibophezele ekulondolozeni imvelo, ukwakha imiphakathi eqinile nenempilo, kanye nokweseka imfundo kuzo zonke izindawo lapho kunezindawo zokungcebeleka zeSandals kanye namabhishi. Ukusuka e-Antigua & Barbuda kuya eBarbados, ukusuka eCuracao kuya eGrenada, kusukela eJamaica kuya eSaint Lucia, futhi kuya eBahamas, amaSandals acebisa ukuphila kwabantu balezi ziqhingi zaseCaribbean.
Ukuze Izicathulo, ithemba elikhuthazayo lingaphezu kwefilosofi; kuwubizo esenzweni. Imayelana nokuhlomisa abantu baseCaribbean ukuzethemba, ukunikwa amandla, kanye nokwaneliseka, kuyilapho kuhlinzeka imiphakathi ngezixazululo zangempela ezisimeme ezinkingeni ebhekana nazo nsuku zonke. Ngokulandelayo, iSisekelo sigqugquzelwa nsuku zonke ukuqina kwabantu, ubuhlakani babo, nokuqina kwabo ukuze bathole impilo engcono. Imiklomelo engenakulinganiswa yeSandals Foundation ibe yinqubekelaphambili nempumelelo yezinhlelo zayo kanye nabahlomuli.
Nakhu okwenziwa nguSandals eBahamas.
I-Sandals Foundation yenze ukuzibophezela kuso sonke isifunda saseCaribbean ukuphendula ngokushesha ezimeni eziphuthumayo zikazwelonke ezibangelwa izinhlekelele zemvelo. I-Foundation ithola uxhaso oluvela ezivakashini zokungcebeleka, abalingani bezohwebo, ama-travel agents, abahlinzeki bempahla, nezinye izinhlangano ukuletha usizo emiphakathini ehlaselwe yizinhlekelele.
IBahamas iye yabhekana nomonakalo omkhulu phakathi neminyaka edlule ngenxa yeziphepho. Ngo-2015, isigaba 4 sesiphepho u-Joaquin senzeka eLong Island sadala umonakalo omkhulu. I-Sandals Foundation iqale umkhankaso obanzi wenkampani yonke kuzo zonke izakhiwo kanye nekomkhulu lebhizinisi ukusiza ngemizamo yokubuyisela eziqhingini.
Ngemuva kwalokho, iSisekelo salungisa futhi sahlomisa iCancer Society Scrub Hill Long Island, iLong Island Resource Centre, ngokubambisana noMnyango wezeMfundo kanye neLadies Friendship Club yaseLong Island.
Ngo-2016, iSiphepho uMatthew sahlasela iziqhingi zaseBahamas. I-Sandals Foundation ihlanganise impendulo esheshayo ukusiza ukusheshisa inqubo yokubuyisela isimo esijwayelekile ekusebenzeni kweziqhingi. Ikhaya lasebekhulile latholwa eBains Town kanye nokuhanjiswa kwamajeneretha, oseyili, ukudla, namanzi eGrand Bahama, e-Andros, naseNassau.
I-Sandals Foundation ibambisene ne-Bahamas National Trust ngomkhankaso we-Conch Conservation njengoba imboni yokudoba ibalulekile ngokwesiko nangokwezomnotho e-Bahamas. Umkhankaso “wokongiwa kwemvelo” usize ukukhuthaza izindlela zokudoba ezisimeme futhi waphumelela ekwandiseni ukuqwashisa ngemboni ye-conch.
Ama-PSA kamabonakude kanye nemisakazo akhishelwa izinjongo zokufundisa emiphakathini yasemaphandleni kanti ama-placemats anezihloko ezicatshangelwayo abekwa ezindaweni zokudlela ezisheshayo kanye nezindawo zokudlela zasendaweni njengengxenye yemizamo yokunxenxa ukwesekwa nokwandisa ulwazi lomkhankaso nezinjongo zawo.
Gibela Ukuze Usindise Amaxhaphozi
Ngemfundo yolwazi, iSandals Foundation ilethe abafundi abangaphezu kuka-3,000 eBahamas ohambweni lokugibela izikebhe ukuya emihlume ukuze babafundise ngokubaluleka kwamaxhaphozi ohlelweni lwendalo. Kuphinde kwasingathwa umncintiswano wamaphosta wabafundi ababambe iqhaza ukuze kuvunyelwe abafundi ukuthi baveze abakufundile ohambweni lwasenkandla.
Kusukela ngo-2010, isikole iGambier Primary School, esinabantu abangabafana namantombazane abangu-105 abaphakathi kweminyaka engu-6 nengu-11 ubudala, besiyisikole esamukelwe seSandals Foundation. ISisekelo sibambe iqhaza elikhulu ekuthuthukisweni kwabafundi, abasebenzi, kanye nezinsiza zesikole eminyakeni edlule okuhlanganisa nokunikelwa kwezinsiza zesikole, uhlelo lokufundisa nokufundisa abafana, ukuhlanzwa kwamazinyo kwabafundi, nokusingathwa kwamaphathi kanye namathoyizi kaKhisimusi waminyaka yonke. ukusatshalaliswa.
Isikole samabanga aphansi iRokers Point besiyisikole esamukelwe seSandals Foundation kusukela ngo-2011. Isisekelo sibe yingxenye ebalulekile yenqubo yentuthuko yesikole ukuze kuqinisekiswe ukuthuthuka kwabafundi ohlelweni lwezemfundo kanye nomphakathi wonkana. Omunye wemisebenzi emikhulu eyenziwa yi-Foundation e-Roker's Point Primary kwakuwukuvuselela nokufakwa kwelebhu yekhompyutha ukuze kuzuze abafundi abangu-140.
I-Sandals Foundations yinhlangano engenzi nzuzo eyethulwa ngo-March 2009 ukusiza i-Sandals Resorts International ukuthi iqhubeke nokwenza umehluko ezimpilweni zabantu lapho izakhiwo ze-Sandals zikhona.